Joystick Arcade: maamulayaasha ciyaarta ugu fiican ee mashaariicdaada gadaal | Qalabka bilaashka ah
Joystick Arcade: ilaaliyayaasha ciyaarta ugu fiican ee mashaariicdaada gadaal
Isaac | | Arduino, Qaybaha elektarooniga ah, Raspberry Pi
Waxaa jira tiro badan oo ah kontaroolada nooca arcade joystick ciyaaraha fiidiyowga ee suuqa, qaar iyaga ka mid ah loogu talagalay mashiinnada 'DIY Arcade', sida kuwa la jaan qaadi kara looxyada sida Raspberry Pi ama Arduino. Iyagu ma haystaan ​​qiimo sare, markaa waxay isu beddeleen qalab aad u xiiso badan oo lagu maareeyo mashaariicdaada oo loogu raaxeysto sidii ilmo.
Doorashada ugu wanaagsan ee joystyst-yada arcade ma ahan hawl fudud, maadaama ay jiraan tiro aad u badan oo iyaga ka mid ah, mararka qaarna kala duwanaanshaha u dhexeeya ayaa si muuqata u muuqda maqnaanshahooda. Laakiin waxaa jira qaar ka mid ah kuwa faahfaahinta yar ayaa isbadal samayn kara. Haddii aad xiiseyneyso, waad sii wadi kartaa aqrinta si aad u ogaato waxa kontarooladaasi yihiin, iyo sida loo doorto kuwa ugu fiican.
1 Waa maxay joystick arcade?
2 Maxaad u baahan tahay inaad ogaato si aad u doorato joystick-ka arcade ee ugu fiican mashruucaaga?
2.1 Noocyada ciyaarta qoob ka ciyaarka
2.2 Adag iyo safar
3 Joysticks-ka ugu wanaagsan ee arcade ee aad iibsan karto
Waa maxay joystick arcade?
Aynu ku tagno qaybo. Waxa ugu horreeya waa in la caddeeyo taas joystick waa joystick. Magaceedu wuxuu ka yimid Ingiriisiga "farxad" (farxad) iyo usha (usha). Qalabkani wuxuu si gaar ah caan ugu ahaa warshadaha ciyaaraha waqtiyadii hore, waana sababta maalmahan ay si ballaadhan ugu adeegsadeen kuwa bilaabaya dib-u-eegista mashaariicda.
Qalabkan waxaa loogu talagalay inay bixiyaan interface xakamaynta loogu talagalay ciyaaro badan oo fiidiyow ah, oo u oggolaanaya maaraynta waxyaabaha ciyaarta qaab aad u fudud. Hawlgalkeedu waa mid aad u fudud. Kabaal ayaa kuxiran taakuleyn, wuxuuna leeyahay faasaska X iyo Y oo leh microswitches ay dhaqaajinayaan dhaqdhaqaaqa kabaalka on faasaska xorriyada ay u ogolaato. Processor wuxuu ka shaqeyn doonaa signalada oo u tarjumi doonaa dhaqdhaqaaqyo.
Dhinaca kale waa ereyga Arcade, taasi waa, mishiinnadaas arcade ee caan baxay dhowr iyo toban sano ka hor oo lagu bixin jiray arcades, xarumaha laga adeegto, baararka, iwm. Sidaa darteed, joystick arcade waxaa loogu yeeraa sidaas maadaama ay yihiin kuwa caadiga ah ee loo isticmaali karo mashiinadan.
Maxaad u baahan tahay inaad ogaato si aad u doorato joystick-ka arcade ee ugu fiican mashruucaaga?
Waxay inta badan kuxirantahay nooca mashruuca inaad abuureyso. Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso mid ama midka kale, laakiin inta badan isticmaalayaasha waxay u isticmaalaan inay ku abuuraan mashiinno iyaga u gaar ah oo raqiis ah iyagoo isticmaalaya Raspberry Pi oo markaa awood u leh inay ku ciyaaraan qaab aad u badan oo dhab ah. kulan video classic isticmaalaya emulators.
Dhinaca kale, waxay kuxirantahay maxaad raadineysaa, waxaa jira laba astaamood oo waaweyn oo ka soocan inta kale marka la dooranayo joystick arcade wanaagsan ...
Noocyada ciyaarta qoob ka ciyaarka
Gudaha joysticks-ka arcade waxaa jira noocyo badan. Asal ahaan khilaafaadku waxay kujiraan sharraxaadda ama qaabka kontarooladaan:
Mareykan (Gacan dheere): Nooca joystick-ka arcade wuxuu leeyahay gacan dheer, oo u eg kabaal. Qaarkood waxay doorbidaan iyaga sidan oo kale inay ku qabtaan baabacada gacanta si ay u qabtaan dhaqdhaqaaqyada. Xaaladdan oo kale, badiyaa waxaa lagu dhajiyaa guddiga.
Jabbaan (Nooca Ball-ka loo yaqaan): waxay ku jiraan qaab kubbadeed, waadna ku qaban kartaa si ka duwan kuwa Mareykanka, adoo isticmaalaya farahaaga oo keliya. Waa arrin dhadhan ama nooca mashiinka arcade ee aad isku deyeyso inaad ku daydaan. Xaaladdan oo kale waxaa badanaa lagu dhajiyaa salka mashiinka.
Si kastaba ha noqotee, dhammaantood waxay u muuqdaan inay leeyihiin qaab isku mid ah oo gudaha ah. Waxay leeyihiin afar mikroswitches si loo ogaado mid kasta oo ka mid ah 4-ta dhaqdhaqaaq ee dhidibka kabaya u oggolaado. Mid walbana waxaa lagu dhaqaajiyaa iyadoo kabaalku u weecinayo dhanka uu u jeedo.
Adag iyo safar
Xitaa way ka muhiimsan tahay nooca, maaddaama waxqabadka kuwani ay inta badan ku xirnaan doonaan labadan heer. Waxaan ka hadlayaa adkaanta iyo safarka noocan oo kale ah joystick arcade.
Adag: waa xoogga ay tahay inaad ku dhaqaajiso kabaalka si aad ugu shaqeyso joystcik.
Safarka: waa xaddiga masaafada ee ay tahay in gacanka ama kabaalka uu ka safro bartamaha (gobolka nasashada) illaa iyo halka uu microswitch ka shaqeeyo si uu u soo saaro nooc dhaqdhaqaaq ah.
Si aad u ogaato nooca adkaanta iyo dariiqa la dooranayo waa inaad cadee nooca ciyaarta fiidiyowga waad ciyaari doontaa. Haddii ay jiraan dhowr, waa inaad ka fekertaa nooca aad ku fulin doonto inta badan. Tusaale ahaan:
La dagaallanka ciyaaraha fiidiyowga ama gawaarida. Sidaas ayaad dhaqdhaqaaqyada si wanaagsan u maamuli doontaa oo aad u soo saari doontaa sax ahaansho weyn.
Ciyaaraha fiidiyowga ee Platform: ciyaaraha fiidiyowga sida Sonic, Mario Bros, iwm., waxa loo baahan yahay waa kacsanaanta weyn, maadaama saxnaanta dhaqdhaqaaqyadu aysan aad muhiim ugu ahayn kiisaskan. Mawduucyadan, ujeedku waa koorso dhexdhexaad ah oo jilicsan.
Haddii aad ku ciyaarto noocyo badan oo noocyada ciyaarta fiidiyowga ah waxoogaa, waxaad u badan tahay inaad doorbiddo joystick arcade ah adkaanta iyo dariiqa dhexe taas ayaa kuu oggolaan doonta inaad si ka fiican ama ka yar ugu ciyaarista dhammaan noocyada cinwaannada. Intaa waxaa dheer, haddii aad rabto fudeyd badan, waxaad u maleyneysaa inaad xiiseyneyso guddi koontarool ah oo horey u soo ururay oo dhameystiran sida kan la bixiyay MIARCADE iyo xitaa qaar ka mid ah mashiinnada Arcade oo dhammaystiran oo jaban:
Iibso mashiin yar oo Arcade ah oo wata 250 kulan
Iibso mashiin yar oo Arcade ah oo wata Pac Man
Iibso mashiin yar oo Arcade ah oo leh Dude xun
Joysticks-ka ugu wanaagsan ee arcade ee aad iibsan karto
Suuqaan dhexdiisa, waad awoodaa muuji qaar ka mid ah noocyada joystick arcade kuwa kale oo ka sii muuqda:
Dhammaan noocyada noocyada ciyaarta fiidiyowga: waxay ku habboon tahay in la ciyaaro labada fiidiyoow ee fiidiyowga ah ee ay tahay inaad ku kaxeyso markab, baabuur, la dagaallanka cayaaraha fiidiyowga, iyo sidoo kale ciyaaraha madal. Waxay leeyihiin adkaansho dhexdhexaad ah waxayna u safraan si ay u bixiyaan natiijooyin wanaagsan cinwaan kasta.
Si loo wado gawaarida iyo la dagaalanka ciyaaraha fiidiyowga: joystick-kan 'arcade joystick' wuxuu leeyahay safar socdaal dhexdhexaad ah, oo leh jilicsanaan ka dhigi doonta dhaqdhaqaaqyadaada kuwa ugu saxsan si ciyaartaadu ay u noqoto waayo-aragnimo weyn, ku guuleysiga waxqabadka aad raadineyso.
EG BILAABO joystick arcade yurub
Qalab dhameystiran: Waxa kale oo aad ka heli doontaa baakado ay ka mid yihiin laba joysticks arcade iyo badhamada, iyo sidoo kale fiilooyinka iyo xakamaynta PCBs, si aad u haysato wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u ururiso mashruucaaga 'DIY retrogaming' arcade.
EG Start Kit
Si aad ula midowdo Raspberry Pi-gaaga, qaar ka mid ah qalabkan ayaa leh xiriir USB si dhaqso ah loo hirgaliyo iyadoon loo baahnayn in lagu daro koodh ama la isticmaalo koronto kale, ama laga walwalo biinanka GPIO, iwm Waxay u fududaan doontaa sida loogu dhejiyo fiilooyinka iyo qaybaha, ku darista guryaha ama taakuleynta aad u diyaarisay iyaga, iyo isku xirka xarigga guddiga loo doortay ee SBC ee loo maro dekedda USB-ga. Marka laga hadlayo Arduino sidaas ma noqon doonto sidaas, maxaa yeelay haddii ay taasi dhacdo waxay lagama maarmaan noqon laheyd in la abuuro sawir gacmeed isla markaana guddiga loo aqoonsado dhaqdhaqaaqyada isla markaana wax laga qabto ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Qaybaha elektarooniga ah » Joystick Arcade: ilaaliyayaasha ciyaarta ugu fiican ee mashaariicdaada gadaal
HC-SR501 - Arduino Dareemayaasha Motion Mooshinka
Arduino Mega: wax walba oo ku saabsan guddiga hormarinta weyn